Ebe nchekwa ọkụ - IntoKildare
Ọ dị na etiti Market Market, na n'okpuru ndò nke Katidral St Brigid. Firecastle bụ onye na -ere nri ezinụlọ, nri pụrụ iche, ebe a na -eme achịcha na ebe a na -ere nri nke nwere ụlọ akwụkwọ nri na ụlọ ime ụlọ iri.
Ngwa ngwaahịa Firecastle Fresh na-enye nri dị iche iche nwere nri dị njikere nke ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ama ama na ụlọ oriri na ọ -ụ awardụ ha nwetara Hartes nke Kildare. Achịcha niile, achịcha na nri niile a na -akwadebe ọhụrụ na saịtị kwa ụbọchị. Tinyere ngwaahịa nke ha, shelves na -ejupụta na ngwaahịa nri nka kacha mma dị ugbu a n'ahịa.
Firecastle na -enye ọnụ ụlọ ndị ọbịa nwere ụdị ụlọ iri nke echebarala echiche nke ọma iji nye nkasi obi na arụmọrụ ị ga -atụ anya n'oge ezumike ọ bụla. Ụfọdụ ụlọ na -enye echiche dị egwu nke Katidral St Brigid.
Ịzụ ahịa, Cafes, Ndị na-emepụta, Nri oriri n’èzí, ọmarịcha nri, Ime ụlọ naanị, mmefu ego, 4 Star, Kildare
Ahịa Market, Kildare, Obodo Kildare, R51 AD61, Ireland.